Wish အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
4.6 | 500,000,000+ ထည့်သွင်းရန် | သုံးသပ်ချက်မျာ
ဒေါင်းလုပ် XAPK（17.7MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Wish - Shopping Made Fun
Wish သည်အမေရိကန်တည်ဆောက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး Mobile Shopping app ကို 60-90% မှ 60-90% ဖြင့်သင့်အားအရည်အသွေးမြင့်သောမိုဘိုင်းစျေးဝယ် app ဖြစ်သည်။
Wish သည်စျေးဝယ်သူများအားထုတ်လုပ်သူများသို့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်သည်။ လူလတ်တန်းစားမရှိဘူး, ဒါကြောင့်စျေးနှုန်းကနိမ့်တယ်, ဒါပေမယ့်အရည်အသွေးကမင်းကုန်တိုက်ကြီးထဲကို0င်ရောက်လာတာနဲ့အတူတူပဲ။ ကမ္ဘာအနှံ့ရှိဈေးသို့သွားသောဈေးကွက်ကိုအရည်အသွေးရှိသောကုန်ပစ္စည်းများရှာဖွေရန်ဆန္ဒရှိသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိကမ္ဘာပေါ်တွင်အခြေ ပြု. သင်အတွက်စျေးဝယ်ရန်ဆန္ဒရှိလိုသည်။ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုဌာနချုပ်ရုံးချုပ်သည်သင့်အားနောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်အကောင်းဆုံးအပေးအယူများကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲသည်။
သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုလုံခြုံစွာထိန်းသိမ်းရန်အတွက်ထိပ်တန်းလုံခြုံရေးကိုအသုံးပြုသည်။ သင်နှင့်သင်နှင့်အတူ0ယ်သောအခါသင်၌သင်နှင့်အတူ0ယ်သောအခါသင်လက်ျာဘက်၌ရှိကြောင်းစိတ်ချပါ။
သင်၏0ယ်ယူမှုများကိုခြေရာခံရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုသည်လျင်မြန်စွာတုန့်ပြန်သည်။
ရက် 30 ရက်ပြန်လာသည့်မူဝါဒများနှင့်မပြည့်စုံပါက 30 ရက်ကြာပြန်လည်ထူထောင်ရေးမူဝါဒများရှိသည်။ Wish Outlet တွင်စျေးနှုန်းချိုသာသောစျေးနှုန်းများဖြင့်အမှတ်တံဆိပ်များကိုကမ်းလှမ်းပါ။ Bolled Apple, Samserite, Burberry, နည်းပြ, Michael Kors, Ray Bank Kors, Pay Sere Shipping, sperier, sperier sperry spoil speakr> Wish Express Truck အိုင်ကွန်နှင့်အတူပစ္စည်းများ 5-7 ရက်အတွင်းသင်၏တံခါးကိုရောက်ရှိလာသောပစ္စည်းများပါ0င်သည်။
Save Save Barger
SAFF SAFFINGS ကို0ယ်ရန်0ယ်ပါ။ သငျသညျ blitz ဝယ်သောအခါ, သင်အပိုအထူးလျှော့စျေးများကိုသင်ဝင်ရောက်ခွင့်ရသောအခါ။
Rear Rearwards ကို0ယ်ယူရန်အတွက်အချက်များနှင့်အတူအချက်များကိုစုဆောင်းပါ။
အခမဲ့ပစ္စည်းပစ္စယများယူပါ။ မှန်တယ်။ အခမဲ့ပစ္စည်းပစ္စယ! စျေးဝယ်သူများသည်ကြိုဆိုနိုင်သောလက်ဆောင်များ, Sweepstakes ဆုများနှင့်အခြားဆုများကဲ့သို့သောအခမဲ့ပစ္စည်းများကိုအနိုင်ရရှိနိုင်သည်။
Trendy Fashion, ဖိနပ်များ, နောက်ထပ်။
Mall ကို skip လုပ်ပါ ...
Trendy အမျိုးသမီးဖက်ရှင်:0တ်စုံ, အကျီများ, အောက်ခြေ, ထိပ်များ, ထိပ်များ, ထိပ်များ, ဆွယ်တာ, ဆွယ်တာ, ဆွယ်တာ, ဆွယ်တာ, atheerie Br> အရည်အသွေးအမျိုးသားဖက်ရှင် - အကျီများ, ဆွယ်တာများ, ဂျင်းဘောင်းဘီများ, ရှပ်အင်္ကျီများ, ခလုတ်များ, forocy0တ်စုံများ, အဝတ်အထည်များ, အဝတ်အထည်များ, အဝတ်အထည်များ, ခါးပန်း, လက်ဝတ်ရတနာများ, လက်ဝတ်ရတနာများ, အိတ်များ, အငှားယာဉ်များ, ကျောပိုးအိတ်များ ...
အီလက်ထရွန်နစ်များ, ကင်မရာများ, ကင်မရာများ, မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များ, ဖုန်းဖြစ်ပွားမှုများ, ဘက်ထရီများ, ဟတ်စတိုများ, , Eyeshadow, Foundation ...
Sneaker များ, ဖိနပ်များ, ဖိနပ်များ, ဖိနပ်များ, ဖိနပ်များ, ဖိနပ်များ, မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, sheets, မျက်မှောက်ခေတ်ပရိဘောဂ, ဂန္ပ furniture ...
ကလေးများ - ကလေးများ, ကလေးများ, ကစားစရာများ, Pplies, Baby Gear ...
အားကစား - လေ့ကျင့်ခန်း - အလေး, အလေး, ဘောလုံး, ဘောလုံး, ဘတ်စကက်ဘော, အမျိုးသမီးလေ့ကျင့်ခန်း, အမျိုးသမီးတစ် ဦး အနေဖြင့်, >
ပညာရေး - ကလေးများ၏စာအုပ်များ, မှတ်စုစာအုပ်များ, မှတ်စုစာအုပ်များ, စာအုပ်များဆွဲခြင်းစာအုပ်များ ...
Wish and W Logo တို့သည် US မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ရုံးများတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသော Contextlogic Inc. ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ မူပိုင်ခွင့်ကိုလက်ဝယ်ထားသည်။
ဘာအသစ်လဲ Wish - Shopping Made Fun 21.11.1
Wish - Shopping Made Fun 21.11.0
Wish - Shopping Made Fun 21.10.0
kyaw kyaw kyawkyaw
chit Lay ko ko
zaw minn zaw minn Online Books Shop